Gudoomiyihii hore ee Baarlamanka Somalia oo ka soo horjeestay xil ka qaadistii ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada | Moment Union Somali Diaspora
Shariif Shiikh Shiikh Aadan gudoomiyihii hore ee Baarlamanka Somalia ayaa si kulul uga soo horjeestay xil ka qaadistii ay maalin ka hor ku sameeyeen xildhibnaano tiradoodu gaareyso 280 mudane oo kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan oo galabta ay wareysatay laanta afka Soomaaliga idaacada codka Maraykanka VOA isagoo ku sugan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa ku tilmaamay xilka qaadista lagu sameeyey mid sharci daro ah oo aan waafaqsaneyn axdiga KMG, heshiiskii Kambala iyo xeer hoosaadka baarlamanka isagoo tilmaamay iney ka dambeeyaan arintaas koox ka tirsan xildhbaanada oo qalalaase u joog ah.
“Koox xildhibaano ah intey xarunta baarlamanka jabsadaan xil ma qaadi karaan sidaasna xil dowladeed looma qaado aniga xilka waa la ii doortay waana la iga qaadi karaa hase ahaatee qaabkii loo baahnaa ee sharciga ahaa sidaa maaha ayaan qabaa sidaas awgeed jidka loo marayna sax maaha tirada meesha ku kulantayna 300 iska dhaafe 100 xitaa ma dhameyn waa la yaqaanaa xildhibaanada” ayuu intaa ku daray Shariif Xasan.
“Sanduuq ayaa la igu doortay sanduuq ayaana la iiga qaadi karaa xilka gudoomiyaha waxaana ka dambeeya arintan koox ka tirsan xildhibanada oo diidan Road mapka oo xitaa hebel iyo hebel la dhihi karo, Road mabkana waa qorshe la doonayo in umada Soomaaliyed dhibaatada looga saaro” ayuu intaa ku daray Shariif Xasan oo beeniyey inuu is hortaag ku sameeyey fadhiyadii Baarlamanka.
Gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Baarlamanka Shariif Xasan ayaa sheegay inuusan tuhun ka qabin iney arintan ka dambeeyaan madaxweynaha ama shaqsiyaad kale oo ka tirsan dowlada KMG ah uuna aaminsan yahay iney ku kooban tahay wax uu ugu yeeray koox xildhibaano ah, isagoo tilmaamay inuu dhowaan dib ugu laaban doono magaalada Muqdisho hiowlihiisa caadiga ahna wadan doono.
Kulan ay doraad magaalada Muqdisho ku yeesheen in ka badan 283-xildhibaan ayaa waxay xilkii uga qaadeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Adaan oo ay ku eedeeyeen inuu ka dhego adeegay inuu furo fadhiyadii Baarlamaanka, isla markaasna uu qabto mooshin ka dhan ahaa isaga.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka hor intii aysan xilka ka qaadin Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya waxay Guddoomiye cusub oo si ku meel ah u hogaamiya u doorteen Xildhibaan Madoobe Nuunoow Maxamed, waxayna sheegeen xildhibaanada inay kalsoonidii kala laabteen Guddoomiyaha Baarlamaanka, ka dib markii uu ku fashilmay ayey yiraahdeen inuu ka soo baxo howlihii loo egmaday.
Sidoo kale xildhibaanada waxay Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan ku eedeeyeen inuu hareer maray sida ay yiraahdeen shuruucdii Baarlamaanka, isla markaasna magac xumeeyay mudanayaasha Baarlamaanka isagoo adeegsanaya qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka waxaana muuqata war hada ka soo baxay Shariif Xasan oo ku diiday in xilka laga qaaday kasoo ku tilmaamay mid sharci daro ah.
One thought on “Gudoomiyihii hore ee Baarlamanka Somalia oo ka soo horjeestay xil ka qaadistii ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada”
Madoobe Nuunow “Gudoomiyihii hore Shariif waxaan ugu baaqeynaa inuu u hogaansamo shuruucda dalka iyo aqlabiyada Baarlamanka”
Gudoomiyaha KMG ah ee baarlamanka Somalia xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed ayaa sheegay in gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Baarlamanka Somalia wixii hadda ka dambeeya uu yahay xildhibaan ka tirsan Baarlamanka. uusana kulamada uu hadda ku qaadanayo dalka dibadiisa ku metelin magaca baarlamanka Soomaaliya.
Madoobe Nuunow Maxamed ayaa intaa ku daray in xil ka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii baarlamanka ay qeyb ka tahay fulinta qodobka ku saabsan dib u habeynta baarlamanka oo ka mid ah heshiiskii magaalada Kambala, isagoo tilmaamay in dib u habeynta aysan saameyn ku yeelaneyn oo kaliya xildhibaanada balse sidoo kale ay taabaneyso ilaa masuuliyinta sare ee Baarlamanka.
“Waxaaan ugu baaqayaa gudoomiyihii hore ee baarlamanka inuu u hogaansamo xilka qaadista lagu sameeyey uuna aqbalo rabitaanka xildhibaanada oo cod aqlabiyad leh ku meel mariyey arintaas, uuna raaco xeer hoosaadka baarlamanka iyo shuruucda dalka, shalay waxaa doortay xildhibaano, wuu aqbalay, maantana isla xildhibaanadii ayaa xilka ka qaaday waa inuu aqbalaa” ayuu yiri Madoobe Nuunow isagoo xusay haddii uu taa yeeli waayo inuu ku guuldareysan doono isku day kasta oo uu ku doonayo inuu mar kale kursiga dib ugu soo laabto.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa ka hor intii aysan xilka ka qaadin Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya waxay Guddoomiye cusub oo si ku meel ah u hogaamiya u doorteen Xildhibaan Madoobe Nuunoow Maxamed, waxayna sheegeen xildhibaanada inay kalsoonidii kala laabteen Guddoomiyaha Baarlamaanka, ka dib markii uu ku fashilmay ayey yiraahdeen inuu ka soo baxo wilaayadii loo egmaday.
Sidoo kale xildhibaanada waxay Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan ku eedeeyeen inuu hareer maray sida ay yiraahdeen shuruucdii Baarlamaanka, isla markaasna magac xumeeyay mudanayaasha Baarlamaanka isagoo adeegsanaya qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka mana jiro war ilaa hadda ka soo baxay Shariif Xasan oo ku saabsan xilka laga qaaday inkastoo ku xigeenkiisa uu ku tilmaamay mid sharci daro ah.